Lyris mandefa ny fanatontosana ny atiny mandeha ho azy | Martech Zone
Lyris mandefa ny fanatontosana ny atiny mandeha ho azy
Zoma, Martsa 27, 2015 Zoma, Martsa 27, 2015 Douglas Karr
Navotsotra i Lyris Lyris Predictive Personalization, motera iray atiny ho an'ny mpamoaka boky mba hampifangaro ny fianarana milina sy ny fandefasan-kafatra fandefasan-kafatra nomerika mba hanomezana atiny voafaritra manokana amin'ny mpanjifa tsirairay.
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana amin'ny fomba mahomby ny atiny amin'ny angon-drakitra demografika sy fitondran-tena momba ny fitondran-tena, ny Lyris Predictive Personalization dia mampitombo ny fidiram-bola sy ny fidiram-bolan'ny dokam-barotra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny mpampanonta mba hampitomboana ny firotsahana. Ny mpanjifa dia efa mahita fiakarana 2x ka 3x amin'ny tahan'ny fisokafana sy tsindry, 25% ka hatramin'ny 50% fihenan'ny churnan'ny mpanjifa, ary ny fitsitsiana fotoana amin'ny famoronana sy ny fikolokoloana.
Ny famoahana atiny misy dikany manan-danja amin'ny fantsona nomerika dia mila automatisation manan-tsaina. Lyris Predictive Personalization dia natao hanararaotana izay rehetra fantatry ny mpanonta momba ny mpihaino azy, ampitomboina amin'ny fifanakalozana amin'ny fotoana tena izy ary mivondrona sy manome ny hafatra mety indrindra amin'ireo mpamaky manerana ireo fantsona nomerika tiany. Ity no lakilen'ny familiana fiara ary fidiram-bola bebe kokoa amin'ny farany. Sylvia Sierra, fahazoana sy fitanana ny mpanjifa SVP ao amin'ny Access Intelligence
Amin'ny alàlan'ny fandefasana automatique ny fivoriambe sy ny fandefasana hafatra manokana namboarina izay misy karazana sy habetsaky ny zavatra navoaka, ny Lyris Predusive Personalisation dia mandrindra ny fanatanterahana fampielezan-kevitra ary mampihena ny fotoana famoronana hafatra sy ny fotoana fitahirizana. Izany dia miteraka fifandraisana misy eo amin'ny mpanjifa mifototra amin'ny sandany izay manome fidiram-bola sy fiovam-po bebe kokoa ary mampihena be ny churnan'ny mpamandrika.
Ny fanamafisana ny maha-izy azy dia toa mifanohitra amin'ny famaritana ny teny, ary raha ny marina, tsy misy olona hanoratra mailaka tsy manam-paharoa iray tapitrisa, tsy amin'ity vanim-potoana ity. Ny fanaovana Lyris Predictive Personalization dia mahatonga ny fandefasana mailaka manokana iray tapitrisa ho mora toa ny mandefa iray. Lyris izao dia mamela ny mpamoaka handefa hafatra manokana arakaraka ny angon-drakitra amin'ny tena izy raha toa ny mpampiasa tsirairay tsirairay no mety hiaraka aminy. Akin Arikan, talen'ny varotra vokatra eto Lyris
Momba ny Lyris, Inc.
Lyris Predictive Personalization dia ao anatin'ny Sehatra fandefasana hafatra ho an'ny mpihaino an'i Lyris. Lyris dia mpitarika vahaolana amin'ny mailaka sy marketing amin'ny marketing nomerika izay manampy ny orinasa hahatratra ny mpihaino amin'ny ambaratonga ary hamorona sanda manokana ho an'ny tsirairay. Ny vokatra sy serivisy nataon'i Lyris dia manome hery ny mpitory hamolavola, hanaingoana ary hanatsara ny traikefa izay manamora ny fandraisana andraikitra ambony, mampitombo ny fiovam-po ary hanome lanja ara-barotra azo refesina.
Tags: votoaty mavitrikatononkiraLyris Audencing Messaging Platformatiny manokanapersonalization mialoha
ClearSlide: Sehatra fampisehoana ho fanamafisana ny varotra
StatDragon: Advanced Analytics ho an'i Vimeo